Ingqalutye, iwotshi ehlakaniphileyo edibanisa kwi-smartphone yakho | I-Androidsis
Ingqalutye ngemibala eyahlukeneyo
Imveliso endiza kuyibonisa apha ngezantsi, Ingqalutye, yimpumelelo kwihlabathi lobuchwephesha kunye nokunxibelelana okushukumayo, ukongeza ekubeni ibe yiprojekthi eyenziwe ngenxa yenkxaso engaphezulu kwe- 70.000 abantu, kunye negalelo labo lemali kwiwebhu Kickstarter.com, benze ukuba iphupha lomdali kunye nomyili walo lenzeke, U-Eric Migicovsky.
U-Eric Migicovsky, iphefumlelwe I-Sony Smartwatch, Wenze imveliso efanayo kodwa nge ukuphuculwa okungapheliyo kunye neempawu zobugcisa, abaninzi bambiza ngokuba ngu I-Smartwach hacker, kodwa inyani kukuba ngenkxaso engaphezulu kwe- 70.000 abantu kunye Ukuxhaswa ngemali ngokuphindwe kalishumi kunoko bekufanele ukufunyanwa, Usifundise sonke isifundo ekwenzeni iphupha lakhe lizaliseke kwaye athathe iprojekthi yakhe ayise phambili.
1 Yintoni ingqalutye?
2 Ingqalutye iimpawu zobugcisa
3 Izicelo ezikhethekileyo
4 Ukuyithenga phi?
Ingqalutye iwotshi yesihlahla yesihlahla ekwaziyo ukunxibelelana neyethu efowuni ngenkqubo yokusebenza Android, ukongeza ekubeni iyahambelana nenkqubo yokusebenza yeselfowuni enkulu yeCupertino genius, iOS del iPhone, iPad e iPod Touch.
Umlindo uqhagamshela kwisixhobo, usebenzisa uqhagamshelo lweBluetooth, kwaye ngale ndlela sigcina sinolwazi olupheleleyo malunga nezaziso ezifunyenweyo, ii-imeyile, iiSMS, iifowuni njlnjl.
Ayisiyonto intsha le, unokucinga ukuba sele kugqityiwe kwaye kugqityiwe iiprojekthi, ezinje ngezo sele zikhankanyiwe I-Sony Smartwatch, okanye Ndijonge esele iphumile kwixesha elidlulileyo kwaye unelungelo lokuba iwotshi yokuqala efanelekileyo emhlabeni.
Ngokuqinisekileyo ulungile kwiingxelo zakho, kodwa nembewu eyodwa, ufuna ukuya phambili, kuba iprojekthi yakhe ibandakanya ukukhutshwa kwe-SDK ukukhuthaza ukwenziwa kwezicelo ezicacileyo zale sixhobo, kweziphi izithembiso zokuba lutshintsho kwicandelo.
Ingqalutye iimpawu zobugcisa
Isikrini se-LCD x esingu-144 x 168.
I-accelerometer ye-axis emithathu kunye nomtshini wesenzo.
I-Bluetooth 2.1 + EDR kunye ne-4.0 (Amandla aphantsi)
Isikrini esinzima somsebenzi
Uyilo oluhle kunye nolwezemidlalo.
Izindlu zifumaneka ngemibala eyahlukeneyo.
Ngokwemithombo eyahlukeneyo, ukuze uqhagamshele kolu lonwabo kunye iwotshi yesandla esiqinileyo, Kuya kufuneka sikhuphele kuphela isicelo esenzelwe le njongo ibizwa ngokuba nembewu eyodwa, kodwa ndicinga ukuba ayikabikho, okanye kuya kufuneka ikhutshelwe ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi nembewu eyodwa, kuba, ngayo yonke imizamo yam, khange ndikwazi ukuyiphumeza.
Ukucaciswa kwantoni nembewu eyodwa sebenza neyakho efowuni, Zilinganiselwe, ukuba ungumsebenzisi we Android, ube nohlobo lwe firmware 2.3 Isonka sejinja okanye ngaphezulu, ngelixa ungumsebenzisi we iPhone, iPad o iPod Touch, ihlaziywe kwi I-iOS5.
Le iwotshi smart sele inayo izicelo ezizodwa zemidlalo, izicelo ezisebenza njenge isantya okanye isantya sokuhamba, ukusuka apho ifakwe kwifayile yethu efowuni Baza kusivumela ukuba sibenedatha echanekileyo kwangoko, enje ngomgama ohanjiweyo, ixesha elichithwe, iikhalori ezitshisiweyo kunye nezinye idatha ezinomdla.
Ikwanayo ulawulo lomculo, ukulawula ngokupheleleyo ukudlala komdlali womculo wethu Android ngaphandle kokuyikhupha epokothweni, ubhaka okanye naphina apho ukhoyo.
Ukuthenga le mveliso yotshintsho, Kufuneka nje siye kwiwebhusayithi yabo, kwaye Joyina uluhlu lokulindanjengoko imveliso okwethutyana iphelile kwisitokhwe emva kokuthengisa ngaphezulu kwe I-85.00 unidades, Kwaye impumelelo enayo ngokungathandabuzekiyo iyamangalisa. Ixabiso lale wotshi, ngokweedatha ezikwiwebhusayithi yayo, malunga ne-150 yeedola zaseMelika, ekufuneka sidibanise kuyo 10 o 15 Iidola ngaphezulu ukuba siyayalela ngaphandle kwe-United States.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ingqalutye, ikamva lihleli esihlahleni sakho
Inkxaso-mali efunyenweyo ingaphezulu kwamaxesha e-100 ngaphezulu kwento ebekufanele ukuba ifunyenwe hayi i-10 njengoko inqaku lisitsho.
Imveliso elungileyo kakhulu enenkangeleko entle kakhulu.